Semalt Expert: Nahoana no Miseho Ny Lehilahy Manaka Ao Amin'ny Internet?
Nanjary loza mitatao ho an'ny indostrian'ny e-varotra ny hosoka amin'ny aterineto. Raha ny mahazatra,Ny webmasters dia tonga saina amin'ny mety hisian'ny hosoka rehefa mahazo ny vola vidiny voalohany. Na dia mahazatra any amin'ny faritra maro aza io endrika hosoka ioamin'izao tontolo izao, ny U.S. dia mitondra ny enta-mavesatry ny fatiantoka maro avy amin'ny aterineto.
Fahita amin'ny antony maro samihafa ny hosoka amin'ny Internet - buy real counterfeit money online. Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia nampifanaraka ny zava-misy marina momba ny hosoka amin'ny aterineto miaraka amin'ny tanjona hanampy anao hiatrehana ny fanafihana.
mora ny mividy ny angon-drakitra momba ny kaonty. Ny hosoka amin'ny Internet dia tsy laharam-pahamehanany olana eo amin'ny lisitr'ireo masoivoho mpampihatra lalàna satria sarotra ny manangona porofo ampy ary sarotra ny manenjika ireo tranga toy izany. Mitovy amin'nyVokatr'izany dia tsy fahita firy ny fanenjehana.
Ahoana ny fanaovana hosoka amin'ny aterineto
Ny fampahalalana momba ny karatra fampindram-bola dia nangalarin'ny olon-tsotra mpanao heloka bevava na tambajotra lehibeamin'ny hackers matihanina.
Amin'ny ankapobeny, ireo mpampihorohoro na sendikan'ny mpandika lalàna dia manafika orinasa sy fikambananamba hahazoana endrika endrika ara-bola na manokana. Raha vao mahazo ny angona ilaina izy ireo, dia mivarotra azy any amin'ny tsena mainty. The more dataNy hackers dia momba ny tomponà karatra, ny avo indrindra ny vidin'ny fampahalalana ao amin'ny tsena mainty.
Ny tahiry nofafoana dia amidy amin'ny antoko fahatelo.
Ny ankamaroan'ny fotoana, ireo olona izay mangalatra ny angona manokana na ny volavolan-dalàna dia tsy mitovyolona mampiasa ny vaovao. Amin'ny ankapobeny, ny lehibe kokoa ny fanafihana, ny tsy fahampian'ny hacker voalohany dia mety hampiasa ny angon-drakitra.
Ny fitsaboana no manandrana sy manaparitaka ny karatra.
Rehefa mahazo ny angon-drakitra momba ny carte de crédit ireo mpidoroka, dia manavaka karatra matevina izy ireokaratra. Mba hahafantarana raha misy karatra mavitrika, dia manakarama kely amin'ny aterineto ny mpisoloky. Raha mahomby ny fifampiraharaham-barotra, dia mivoatra ry zareony carte de crédit.
Miankina amin'ny habetsaky ny hackers momba ny angon-drakitra misy azy ireo, afaka mandalo izy ireoamin'ny maha-tompony ara-dalàna ny karatra ary na dia mitifitra amin'ny filalaovana hosoka amin'ny aterineto mihitsy aza.
Nahoana no tsy fahita firy ny hosoka amin'ny aterineto
Matetika ny asa fanaovana pirinty mamaky boky dia asa goavana noho ny antony maro. Voalohany, anNy famotopotorana dia tsy maintsy mamakivaky sisintany iraisampirenena sy iraisam-pirenena izay mahatonga olana ara-pitsarana.
Faharoa, sarotra foana ny manangona porofo amin'ny hosoka amin'ny aterineto. A fraudster izadia manondro ny adiresy imailaka vaovao ary manofa bokotra iray amin'ny anaran'ny diso. Manome porofo tsy dia misy dikany izanyny heloka amin'ny mpangalatra. Vokatr'izany, ireo masoivoho mpampihatra lalàna dia mety tsy hanana porofo ampy hanenjehana ny heloka.
Ankoatra izany, ny heloka bevava e-commerce dia matetika hita ho olana faran'izay laharam-pahamehana.Izany dia satria ny vola midina amin'ny vola halatra dia matetika ambany. Mandritra izany fotoana izany, mety tsy ho vonona ny hanaraka ny mpangalatra ilay niharam-boinaindrindra raha ny tompon'ny karatra dia mahazo antoka fa mahazo alalana amin'ny banky izay namoaka ilay karatra. Ary rehefa mampitaha ny salan'isa ianaoNy habetsaky ny tranokalan'ny fivarotana e-varotra dia manjavozavo amin'ny tranga ataon'ny FBI sy ireo sampan-draharahan'ny lalàna momba ny fampiharana lalàna ao amin'ny tranokalany, manombokamba hahatakarana ny antony mahatonga ny hosoka e-varotra ho laharam-pahamehana ho an'ireo sampan-draharaha ireo. Amin'ny ankapobeny, tsy ireo fikambanana toy ny FBITsy miraharaha ireny tranga ireny, fa tsy manana mpiasa ampy hanenjehana ireo mpanao heloka bevava aterineto.